M/wayne Shariif oo khudbad ka jeediyay kulanka Golaha Amaanka ee QM ka yeeshay xaaladda Soomaaliya – Radio Daljir
Newyork, May 16 – Madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa khudbad ka jeediyay shirkii Golaha Amaanka QM uu galinkii dambe ee shalay ka yeeshay xaaladda Soomaaliya.
Shirka oo kadhacay xarunta QM ee New York ayaa diiradda lagu saaray xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee ka jirta gudaha wadanka Soomaaliya.
Khudbad dheer oo uu madaxwaynahu ka jeediyay xaaladda dalka ayaa waxaa uu soo hadal qaaday shirka lagu soo xulayo ergada ansixinta dastuurka ee xiligaan odayaasha beelaha uga socda Muqdisho.
Madaxwaynaha ayaa tilmaamay, geedi socodka dastuurka inuu marayo meel wanaagsan xiligaana ay culimaa?udiinka iyo bulshada qaybaheeda ay ka shirayaan ansixinta dastuurka si loo helo dastuur dhamaystiran iyadoona laga baxayo xiliga KMG oo muddo 20-sanadood uu dalku ka jirtay dowlado KMG.
Dhinaca kale, waxaa uu soo hadalay qaaday kaalmada beesha caalamka oo uu ku dhaliilay inaan loo soo gaarsiin dowladda sidii loogu tala galay, tan iyo markii shirkii London lagu gaaray in la magacaabo guddi dhaqaalaha lasiinayo Soomaaliya u qaabilsan beesha caalamka.
Waxaa uu codsaday madaxwaynaha in loo baahanyahay in guddiga si deg deg ah loo soo magacaabo si dowladda ay u dardar geliso qorshaha horyaala oo uu Road Mapku ka mid yahay.